Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la kulmay Madaxweyne ku xigeennada dowlad Goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug - Iftiin FM
by Iftiin FM Reporter May 24, 2022
Madaxweynaha Cusub ee dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la soo sheegaya in uu kulan ballaraan uu la qaatay Madaxweyne ku xigeennada dowlad Goboleedyada Jubbaland, Maxamuud Sayid Aadan iyo Galmudug Cali Daahir Ciid.
RW Rooble oo kulamo ka wado Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug.
Masuuliyiinta ayaa ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka iyo sidii si wadajir ah looga shaqayn lahaa Danta Dalka iyo Dadka.
Warar ay warbaahinta heleen ayaa sheegaya in dhinacyadu ay isla soo qaadeen sida laga yeelayo xaaladda Gobolka Gedo iyo waxka qabashada dhibaatooyinka Amni darro ee kajira degaannada Maamulka Galmudug.
Galmudug oo shaacisay liiska guddiga soo xulaya ergada dooraneysa Saddex Kursi
labada Madaxweyne kuxigeen ee Galmudug iyo Jubbaland ayaa sheegay inay wadashaqeyn dhow la yeelan doonaan dowladda Cusub ee Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si loo wada anbaqaado dhismaha dowladnimada Soomaaliya.
Maamulka Galmudug Oo Shaacisay Doorashada Kuraastii Ugu Dambeysay Golaha Shacabka
Danjire James Swan oo sheegay in Qatar Bani’aadannimo ay kajirto Soomaaliya
Xildhibaan ka dhawaajiyey in Muqdisho laga wado abaabulka qorshe xilka looga tuurayo Laftagareen